É, é (e-matsilo) dia ny soratry ny abidy latina. Izany dia hita ao amin'ny teny anglisy, ny anarana, ny anarana, ny anarana, Emilian-Romagnol, malagasy, frantsay, ny Anarana, ny anarana, ny Anarana, ny Anarana, ny anarana, ny Zavatra, ny Zavatra, ny Zavatra, ny anarana, ny anarana, ny anarana, espaniola, ny anarana, ny Vietnamiana, sy ny Zavatra fiteny, amin'ny maha-variant ' ny taratasy "e". Amin'ny teny anglisy, dia mety ho hita toy ny poloney fanampiana amin'ny teny nindramina (e.g., résumé avy amin'ny teny frantsay) na romanizations (e.g., Doraemon amin'ny teny Japoney). Io dia ampiasaina koa amin'ny anarana sy Navajo.
É na é ihany koa no ampiasaina ho an'ny /ɛ/ miaraka amin'ny rising feo ao pinyin, ny teny Sinoa romanina-abidy hanoratana ny rafitra. Izany dia ampiasaina koa amin'ny Indoneziana rakibolana ny mpanao /e/, mifanohitra amin'ny E, e /ə/.
1.1 Tseky sy slovaky
1.2 Anarana, ny anarana, sy ny zavatra
1.14 Gaelika Sikaotisy
2.1 Manan-danja ny kapoka
Fampiasana amin'ny fiteny isan-karazanyModifier
Tseky sy slovakyModifier
É dia ny faha-5 taratasy ny zavatra abidia sy ny zavatra abidia sy ny misolo-tena /ɛː/.
Anarana, ny anarana, sy ny zavatraModifier
Amin'ny teny danoà, ny zavatra, ary ny anarana, ny taratasy "é" no ampiasana dia milaza fa ny terminal izy amin'ny teny e dia miady saina, ary izany dia matetika ampiasaina ihany raha miova ny heviny. Jereo ny Matsilo lantom-peony ho amin'ny antsipirihany kokoa ny famaritana.
Tahaka ny amin'ny teny anglisy, ny é dia hajaina rehefa manoratra teny vahiny, indrindra avy amin'ny teny frantsay. Koa izany no ampiasaina mba hanavahana ny lahatsoratra "lahatsary iray," mitovy na "ny" na "ny" amin'ny teny anglisy, ary "één", ny isa iray. Izany no ampiasaina ihany koa mba hanampy maso ny adin-tsaina eo ny teny ao amin ' ny fomba malagasy dia mety mampiasa sora-mandry. Amin'ny zavatra, ny olona sasany mampiasa ny "nanambara" toy ny fiarahabana, toy ny "hey" na "hi".
Ao Emilian, ny é dia ampiasaina mba hisolo tena [b], ohatra récc [rekː] "manan-karena". Ao Romagnol mitovy ny taratasy no ampiasaina mba hisolo tena [eː], ohatra lédar [ˈleːdar] "mpangalatra".
Amin'ny teny anglisy, ny e-matsilo dia misy mampiasa, ny ankamaroany amin'ny teny frantsay niaviany, toy ny née, résumé, fofombadiny, sauté sy coupé sy anarana toy ny Beyoncé, Breneé, Jon Benét, ary Théo. Doraemon, ny haino aman-jery franchise fananan'ny orinasa Japoney Nintendo, manana ihany koa ny avy any an-iombonana ny fampiasana. Koa, Padmé Amidala amin'ny Star Wars manana é ao ny anarany.
Ny taratasy é (tononina /e/) dia mifanohitra amin'ny è (izay dia tononina /ɛ/) sy be mpampiasa amin'ny teny frantsay.
É dia ny faha-9 taratasy ny zavatra abidia sy ny misolo-tena /eː/.
É dia ny faha-7 ny taratasy ny Zavatra abidia sy ny misolo-tena /jɛː/.
Ao Irlandey ny matsilo lantom-peo (fada) marika lava teny ary izany é tononina /eː/.
É dia variant E mitondra ny matsilo lantom-peony; maneho ny /e/ mitondra ny tonic lantom-peony. Izany no ampiasaina ihany raha toa ka ny taratasy farany ny teny, afa-tsy amin'ny rakibolana na raha hafa nerlandey mety hisy fiantraikany eo amin'ny hevitry ny teny hoe: perché ("nahoana"/"satria", Endrika:IPA-it) sy ny pésca ("manjono", Endrika:IPA-it), azo ampitahaina amin'ny caffè ("kafe", Endrika:IPA-it) sy ny pèsca ("paiso", Endrika:IPA-it), izay manana ny fasana lantom-peony.
É dia ny faha-8 taratasy ny Zavatra abidia sy ny misolo-tena /ɛ/. Izany ihany koa dia maneho [ej] amin'ny fitenim-paritra sasany ary maneho [i]/[ɨ] ao amin'ny faritra eo Puck sy Kartuzy.
Amin'ny teny portiogey, ny é dia ampiasaina mba hanamarihana ny miady saina /ɛ/ tamin'ny teny izay nanamafy izy dia ampoizina ao anatin'ny teny, toy ny ao amin'ny "péssimo" (tena ratsy). Raha ny toerana misy ny miady saina izy no mialoha, ny matsilo lantom-peony dia tsy ampiasaina. É /ɛ/ mifanohitra amin'ny ê, /e/. "É" atao ihany koa ny hoe "no": izy é bonita (izy no tsara tarehy).
Amin'ny teny espaniola, ny é dia mitendro taratasy ary dia nanambara toy ny "e" /e/. Ny lantom-peo mampiseho ny miady saina izy ao amin'ny teny ara-dalàna ny adin-tsaina, toy ny ao amin'ny "éxtasis" na "bebé". Jereo Diacritic sy Matsilo lantom-peony ho an'ny antsipirihany bebe kokoa.
É dia ampiasaina indray mandeha ao gaelika sikaotisy, fa ankehitriny dia efa betsaka superseded amin'ny "è". Mety mbola ho hita, fa izany dia tsy misy intsony ampiasaina ao amin'ny fitsipika tenenina.
Ao Welsh, teny adin-tsaina matetika mianjera ao amin'ny penultimate izy, fa fomba iray milaza ny adin-tsaina eo amin'ny farany (fohy) zanatsoratra dia amin'ny alalan'ny fampiasana ny matsilo lantom-peony, matetika hita ao amin'ny e amin'ny teny nindramina: personél Endrika:IPA-cy "mpiasa", sigarét Endrika:IPA-cy "sigara", ymbarél Endrika:IPA-cy "elo".
Amin'ny Vietnamiana, ny taratasy "é" dia manondro ny rising feo. Mety ihany koa ny miaraka amin'ny "ê" endrika "ế".
Toetra amam-panahy mappingsModifier
Manan-danja ny kapokaModifier
Microsoft Windows users can type an "é" by pressing Alt130 or Alt0233 on the numeric pad of the keyboard. "É" can be typed by pressing Alt144 or Alt0201.
On US International and UK English keyboard layouts, users can type the acute accent letter "é" by typing AltGRE.
In Microsoft Word, users can press Ctrl' (apostrophe), then E or ShiftE for "é" or "É".
On macOS, users can press optionE, then E or shiftE for "é" or "É".
Using a compose key, users can hold Compose and press ' (apostrophe) E for "é" or Compose ' (apostrophe) ShiftE for "É".
Jereo koa nyModifier
Omniglot - tsoratra ny rafitra & fiteny tontolo izao
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=É&oldid=795200"
Dernière modification le 15 Janoary 2017, à 09:59
Voaova farany tamin'ny 15 Janoary 2017 amin'ny 09:59 ity pejy ity.